Tattoo ethangeni lakhe "Izimbali": izici, ukubaluleka, imidwebo
Esinye sezihloko ezihlanganisayo ezidume kakhulu Tattoo kwethanga - izimbali. Babukeka kokubili njengabesifazane kanye cheeky, futhi ezihlukahlukene enkulu izifundo akulula ukuba ulahleke. Cabanga ngemibono ebanda kunazo, khuluma ngezinto izitayela, imibala kanye nezici. Mhlawumbe kuyokusiza wenze izinqumo ezinhle.
Tattoo umbala kwi hip kungenzeka abamnyama. Kodwa okungenzeka akukho kuncike akubukeki ngakho okuhle umbala, njengaleli. Ngakho-ke, amantombazane amaningi ukukhetha umbala emzimbeni.
Izimbali Umbala kungaba ezemvelo kanye Amazing kakhulu. Red Roses - Classic ukuthi kubukeka kahle ngaso sonke isikhathi. Kodwa kungani kwakungeke bebeyoba onsomi? izinqumo ezinjalo zivame kakhulu bheka kunenzuzo kakhulu.
A ukuthambekela okuvamile - tattoo ezimhlophe ethangeni lakhe. Izimbali enziwe upende omhlophe, bheka ikakhulukazi kabuthaka nangokuthula kungabonakali. Babukeka njengezihlahla lace yangempela.
Namaqiniso, esikoleni ubudala, Chicano, wesizwe - Kubonakala sengathi akukho isitayela leso bekungekhe kube tattoo olufanele ethangeni lakhe, "Izimbali".
Abasenzela amathekhiniki Amazing kakhulu. Namuhla, le ndaba liphefumulelwe abaculi izinhlobo ezahlukene.
Ngezinye izikhathi iwe imibala kanye neminye imininingwane engavamile. Umdwebo tattoo izimbali phezu hip ngokuvamile zihambisana kudabuke neminsalo, izimpaphe nezinhliziyo, ushukela izingebhezi kanye Dreamcatcher.
nice kakhulu izinyoni ngifuna, izilwane ezincane kanye izimvemvane, sizungezwe ezimibalabala. Umqondo Great ukunikeza indaba emfushane ukugcizelela ubuntu kanye nesitayela - engeza lace, ubuhlalu noma amaketanga.
Izimbali phezu kwethanga - isithombe tattoo ebonisa ukuthi bheka futhi cute, futhi inselele ngesikhathi esifanayo. Amanye amantombazane zama ngiyibeke ephakeme ukuze ukwazi ukufihla ngaphansi izingubo zakho kude emehlweni prying. Futhi umuntu kunalokho, efana emzimbeni omkhulu, okungase ugabise, begqoke izikhindi iDemo noma ingubo.
Beka tattoo kungaba ohlangothini, phambi noma ebusweni ezingemuva kunawo wonke.
izitshalo Ziningi okwelapha, ngakho emzimbeni izimbali ngezinye izikhathi udumo ayelapha. Inflorescences kabanzi magic amasiko. Yiqiniso, akunakwenzeka kuthinte bezibona emzimbeni.
Amantombazane amaningi ngubani athokozise ukwenza tattoo ethangeni lakhe, "Izimbali", achitha isikhathi esiningi kokukhetha amaphuzu asemqoka. Phela, imbali ngayinye imelela okuthile okukhethekile.
Lily - isihloko nezidumile tattoo. It endulo ezihambisana ngamandla le nkosi, umsuka ezihloniphekayo, nangokuhlanzeka. Lena akuyona nje iwuphawu lwamandla, kuba kunalokho wuphawu Umbusi ohlakaniphile futhi nje. Yena luhlobise amajazi umndeni izikhali lokuzalwa eziningi kwesikhulu (isibonelo, elingenamikhono izingalo Tudor).
Abanye baphikisa ngokuthi e uphawu maphakathi nekhulu le-lily ehlombe uphawu amantombazane kabi, kodwa, kuqala, lena evusa impikiswano, futhi okwesibili, isicelo isikhala kusho lutho esingaphansi uhlamvu uqobo. Ayikho isetshenziswe ngomqondo ongathandeki lily ziyabhalwa ethangeni lakhe, ungalokothi kwenziwe.
Indlovukazi izimbali rose - Indaba ezingengaphansi ezivamile. Kuyinto iwuphawu ubufazi, ukunethezeka, charm nobuhle elingabuniyo. Florists uyavuma ukuthi le mbali iyinhle kangaka ekahle ovuthiwe labetibambile owesifazane kuka intombazane esakhula. Ngokukhetha le indaba ephathwayo for isithombe senyonga ucabangisise ukuthi uyogcina kubonakale kuwe esinda kakhulu futhi abophe?
Lotus - akuyona nje imbali, uphawu yokuhlakanipha, ukuzinikela, ukukhanya kwasezulwini. Amafilosofi aseMpumalanga simdumise ukudlula noma iyiphi enye isitshalo. Uma futhi abanothando isiko Eastern, mhlawumbe Lotus - lena inketho yakho.
Futhi indlela kufanekisa ezijulile ligcwele Dandelions imbali, okuyinto sivamile ngakho ukubona ngasezinyaweni zakhe! Bright ophuzi amalanga encane ivele phakathi entwasahlobo, ojabulisa kakhulu iso futhi zisikhumbuza ukufika okuseduze ehlobo. Lezi zimbali ngokwabo avame ukuhlotshiswa umphuphi bejabule, okulula uya futhi isilungele adventure. A curvy ayevumela amabhola Dandelions, okuyinto ahlakaze amakhulu fluff-parachutes, kuyafaneleka kubo buhlungu, hhayi ngaphandle isizathu kubhekwa uphawu uhambo olude kanye nohambo. Tattoos ezinjalo zivame olufuna labo bayathanda ukuhamba amabanga amade.
Chamomile - uphawu yokushayela budedengu, ukudlala, mnene ubuhle bemvelo. Lezi amalanga Lomncane amantombazane avame ukuhlotshiswa abafuna ukugcizelela intsha, isimo sengqondo esiqondile, unomusa. Abaningi bakholelwa ukuthi emzimbeni nge daisies kanye nezinye umbala ebukekayo kuletha kubanikazi inhlanhla nokuchuma.
Yokukhipha izindawo obuseduze.
Kuthiwani uma izinga lokushisa kwengane livuka olwandle
Njengoba ekhaya ukukhulisa amakhona umlomo wakhe: Isinyathelo by step imfundo, izindlela eziphumelelayo
Ukwenqaba ukubhema: izindlela ezingu-10 zokuqeda izifiso zokubhema
"Losek CI": yokusetshenziswa. "Losek CI": ukuphathwa, ukubuyekezwa, izimpawu, contraindications